Wasaradda Arrimaha Gudaha DFS oo sheegtay in doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed xilligeeda la qabto - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaWasaradda Arrimaha Gudaha DFS oo sheegtay in doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed xilligeeda la qabto
November 6, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in doorashada maamulka Koonfur Galbeed lagu qabto xilligeeda.
“Wasaaradda Arimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u Heshiisiinta iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah waxay faraysaa madaxda Dowlad Goboleedka Koofur Galbeed ee Soomaaliya in doorashada dowlad goboleedka ay qabsoonto xilliggii loo asteeyey oo ah 17ka November 2018ka.” Ayaa lagu sheegay bayaan maanta oo Talaado ah kasoo baxay wasaaradda.
“Muddada xilhanyta maamulka hadda ka jira koofur galbeed waxay ku egtahay 17ka November lamana aqbali doono in ay dib uga dhacdo.” Ayaa lagu sii sheegay bayaanka.
Bayaanka ayaa sidoo kale looga codsaday guddoonka iyo xildhibaannada baarlamaanka Koonfur Galbeed in iyagoo gudanaaya waajibaadkooda dastuuriga ah ay si daahfuraanna u qabtaan doorashada madaxwaynaha dowlad goboleedka waqtiga loo asteeyey iyadoo la ilaalinayo xasiloonida iyo deganaashaha Koofur Galbeed.
Isniintii, qaar katirsan guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed oo ay kamid ahaayeen guddoomiyihii iyo ku xigeenkiisii ayaa iscasilay, iyaga oo sheegay in guddiga ay farogelin ku heyso Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Doorashada Koonfur Galbeed ayaa qorshuhu yahay in ay dhacdo bartamaha bishaan, waxaana ku loolamaya musharixiin badan oo uu ku jiro hoggaamiyaha hadda jooga Shariif Xasan Shiikh Aadan.
Balse waxaa laga yaabaa in ay wakhtiga doorashada ay dib u dhacdo maraca loo fiirsho khilaafka xoogan ee jira.
Ilhaan Cumar oo ku guuleysatay aqalka Congress
Garoowe-(Puntland Mirror) Godad iyo burbur kale ayaa soo gaaray wadada weyn ee laamiga ah oo isku xirta gobolada Puntland kadib roobab mahiigan ah. Wadada ayaa yeelatay godad iyo burbur kadib markii ay mareen daadad ay [...]
No weapon on plane at Qardo airport, Puntland civil aviation minister says
Badhan-(Puntland Mirror) Puntland denied allegation that a weapon found from plane at Qardo airport last week. Speaking to reporters in Badhan town on Monday, Puntland’s minister of civil aviation and airports Hussein Osman Lugtor said [...]